Umthengisi wamanzi ongenamanzi ongenamanzi ngaphandle kokucoca amanzi ..
Ifunwa nguwe isitshisi samanzi kwinkampani, eofisini? Indawo yamanzi njengommeli kuphela Isithambiso EPoland kuyafuneka izihluzi zamanzi ezingenabhotile isetyenziselwa i- irestyu, iihotele, ofisi, iiofisi, iikliniki kunye nezibhedlele, izikolo, iipaki kunye nezixhobo zemidlalo, Ukuzilolongela umzimba yaye indlu.
Isithambiso namhlanje sesona sivelisi sikhulu sase-Italiya kunye nenkokeli yamazwe jikelele ekuveliseni izisombululo eziphucukileyo zamanzi okusela.
Ukuveliswa kweefriji, zombini kwiibhotile kunye nasemanzini, yi-100% eyenziwe e-Itali.
Isithambiso sokuqhayisa sesinye sezona zinto zibonakalayo zibanzi kumashishini, zombini ngokweendidi zeemveliso ezizisiweyo amanzi - Ubushushu begumbi, ukubanda, ukushushu, ukukhanya, kunye neemodeli ezahlukeneyo ezikhoyo.
Ukuzinikela kwamanye amazwe, kunye nomgangatho weemveliso zawo, kuvumele le nkampani yezobugcisa ukuba ifike kwinqanaba lokugqwesa kwaye ibe ngumthengisi kwamanye amaqela abaluleke kakhulu wokuthenga, e-Italiya nakwihlabathi liphela, apho kuyilwa khona iziko.
Hi-Class isilinda-samahhala samanzi sokuhambisa amanzi
Hi-Class yindawo ephezulu yokuhambisa amanziy, yenzelwe kwaye yenzelwe zonke izicelo kunye nezinto zangaphakathi. Isebenzisa izisombululo zamva nje kwezobuchwephesha kunye nezixhobo ezilungileyo eziqinisekisa ukusebenza ngokuphezulu kunye nokuthembeka, okukuvumela ukuba ufike kwi-45 l / h yokubandayo nokubamba kwamanzi kunye ne-13 l / h yamanzi ashushu.
Isebenza iintlobo ezine zamanzi: Ubushushu begumbi, ukubanda, ukuphaphaza kwaye kushushu, okunokuthululwa kwiinqanawa zobude obahlukeneyo ngenxa yokuphuma kohlengahlengiso. Ifom yanamhlanje; umphambili wenziwe ngeglasi yeglasi emnyama idityaniswe nentsimbi engenanto kunye nepaneli yokulawula ubuhle, ukudala imveliso enexabiso eliphakamileyo kakhulu lokusebenzisa.
Umatshini wokuhambisa amanzi ngesilinda-ngaphandle kwesilinda. Kubanda, kushushu kwaye kuyanetha
I-Pro-STREAM yindawo yokudlala Uyilo lwala maxesha kunye nolunobunkunkqele kunye nekholamu efakwe kwithem thermally, iphaneli yochukumisi yokulawula, ukwazisa ngokucacileyo ngemeko yokusebenza yesixhobo, kubandakanya imisebenzi: ukulungela, ukufudumeza, ukucima. Isebenza ngokwahluka ngeboiler, kwifriji kunye nenkqubo ye-gassing.
Inkqubo ikwanayo nenkqubo ebucayi elawula indlela yokusebenza kwesixhobo, ekunciphiseni ukusetyenziswa kwamandla. Ikhuphela amanzi ashushu ngeqondo lobushushu lama-98 ° C ukusuka kumzuzu wokutshintsha, ukwazi ukuzalisa ukuya kuthi ga kwiikomityi ezingama-215 ngeyure enomthamo we-250 ml, kunye nenketho yokubanda kunye nokutsha kwamanzi ukuya kuthi ga kwi-15 l / h. Ingasetyenziselwa ukwenza iti, ikofu kunye nezinye iziselo ezishushu ngendlela ekhawulezayo nesebenzayo.
Indawo yokuhambisa amanzi
Ubumdaka-Isicoci samanzi esingasilinda-silinda: esebenzayo, eqinileyo, ngokujonga kwale mihla, yenziwe zezona zixhobo zixabisekileyo ziqinisekisa ukusebenza okuqinisekileyo kunye nokuqina. Izisombululo ezisetyenzisiweyo kwezobuchwephesha kunye nezobuchwepheshe ziqinisekisa ukusebenza ngokulula nangokukhuselekileyo, ezichaphazela kakhulu iindleko zokusebenza ngokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla.
Eyona ndawo ifudumeleyo yeyamanzi angena lula e-Aquality ibonelela nge-22 l / h yamanzi abilayo kunye neefilitha, anele abantu abangama-40.
I-Aquality isebenzisa itekhnoloji yeBhanki ye-ICE kule ndawo ipholileyo, edibene ngqo nokunikezelwa kwamanzi.
Akukho ndawo yokugcina amanzi eyakhelweyo, ebonelela inqanaba eliphezulu lokhuseleko njengoko amanzi angagciniwe ngeempelaveki nangeholide.
Amanzi apholileyo apholisa ngokugcina indawo yokugcina. Uyilo oluhleliweyo lulungele nayiphi na imeko engqongileyo.
Ubumnandi benesithuba esikhulu sokuhambisa esikuvumela ukuba ugcwalise ijegi kunye neebhotile.
Igqibelele njengenkqubo yamanzi asekhaya okanye njengendawo epholileyo yamanzi eofisini
Udibaniso lwendebe yokudityaniswa (iindebe ezisi-7)
Ngaphandle kwetanki lokugcina / ukupholisa ngokuthe ngqo
Ukunikezelwa rhoqo kwamanzi amatsha ahlanjululwe
Umzi okhoyo wokuhambisa
Ucoceko, kulula ukusula ukucoca iindawo
Okubandayo kwamanzi okupholisa
Iinguqulelo ezifumanekayo: igumbi lokushisa lamanzi, ukubanda, ukushushu, ukukhanya.
I-J-iklasi yokuhambisa amanzi ngaphandle kwe-silinda
IJ-Class abahluzi bamanzi Ziyahambelana ngomgangatho ophezulu kakhulu kunye neetekhnoloji ezigqwesileyo, ezenza ukuba zibe sisixhobo esithembekileyo ezandleni zabasebenzisi, ngenxa yokuguquguquka kwezinto, zisetyenziswa kwiiofisi, iibha, iivenkile ezincinci zokutyela kunye namakhaya.
Ezi ndawo ziyafumaneka kwiintlobo ezimbini ezahlukeneyo: I-TOP kwi-counter kunye ne-IN ephantsi kwekhawuntari, isasaza iintlobo ezine zamanzi: ubushushu begumbi, amanzi abandayo, amanzi ashushu kwi-98 ° C kunye namanzi acarbonated, enamacala amabini angama-30 l / h kunye nama-45 l / h.
I-Niagara Phezulu ye-silinda yokuhambisa amanzi engenasylina
INiagara-abahambisa amanzi kusapho olu luhlala luhleli kwaye lunokuthenjwa izixhobo ezinobuchule ezithatha indawo yamanzi asebhotileni, ukuqhuba ngokusebenza, ukuphelisa isidingo sokuhlola nokugcina, ukugcina ixesha kunye nokwenza lula izinto, kunye nokunikezela ngemigangatho ephezulu kunye nokusebenzayo.
Ke ngoko, zenzelwe izicelo ezinkulu, eziqinisekisa ukusebenza ngaphandle kwengxaki xa usasaza isixa esikhulu samanzi ekharbonayiti kunye namanzi, ekuvumela ukuba ugcwalise phantse zonke iintlobo zeenqanawa ngokukhawuleza kwaye unciphise iindleko. Zintathu iintlobo zeemodeli: indawo ephezulu yokubala, i-under under counter and freestanding.
UMGANGATHO WAMANZI wokugcina amanzi angenasilinda
Ifanelekile ekusasazeni isixa esikhulu samanzi abandayo, zombini asasakhazimlayo. Ingena ngokugqibeleleyo kwicandelo lokutya: kwimivalo, kwiivenkile zokutyela, kwiihotele nakwiicanteens. I-dispenser inokunxulunyaniswa nayo nayiphi na inkqubo yangaphambi kwe-counter ukufezekisa zonke iimfuno zokuhambisa. Ukusebenziseka lula kunye nokukhethwa kwezinto ezikumgangatho ophezulu ziqinisekisa ucoceko oluphezulu kwaye kwangaxeshanye kunciphise isidingo solondolozo olungaqhelekanga.
I-H2O ye-HXNUMXO engasasetyenziswayo yokuhambisa amanzi yam
I-H2O sisicoci samanzi ngemilinganiselo ebumbeneyo, uyilo lwale mihla, ulula kwaye usebenze ngokusebenza, ukuba ngowona mthombo wamanzi anencasa kwiqondo lobushushu begumbi, ukubanda, ukutsha nokutsha.
Iza kwiinguqulelo ezimbini: I-TOP countertop kunye ne-IN phantsi kwe-countertop ene-spout.
I-G ZERO cylinder-free water dispenser
Isikulufu esimanzi esimiswe ngombane ngombala omnyama okanye ophathwayo.
Isicoci samanzi esingasetyenziswanga samanzi se-Acqua Alma Point - Amava amatsha abandakanyekayo edijithali ukukhusela iplanethi yethu
I-Acqua Alma Point sisixhobo esichazayo esinokusasaza naluphi na uhlobo lwamanzi, siyenze ivumba ukuze senze iziselo ezikhoyo, kodwa uninzi lwazo zonke izinto ziyasebenzisana nomsebenzisi ngokusebenzisa iAququa Alma Refill ye-APP kunye nebhotile enobuhle kunye ne-NFC tag. Ngombulelo kwisicelo, umsebenzisi unokuphatha iiprofayili, ukhetho, iindlela zokupheka, uhlala ehlola inqanaba le-hydration kwaye ufumane indawo ye-Acqua Alma ekufutshane. Nangona sinombulelo kwi-NFC, le bhotile inxulunyaniswa neprofayile yomsebenzisi kwaye yamkelwa ngoomatshini, ikhumbula izithomalalisi okanye ukukhuthaza ukusebenza kwiprofayili.
5 / 5 ( 64 iivoti )
Indawo yeAququ Almaabahluzi bamanzi cylinderlessIsicoci samanzi esingasilinda-silindaibhotile yamanzi kwi-dispenserisitshisi samanzi sasekhayaukuhambisa amanzi eofisiniukubonelelwa kwamanzi entwasahlobo endlwiniababoneleli bamanzi kwiinkampaniukuhambisa amanzi kwiinkampaniukusasazwa kwamanzi amamineraliisitshisi samanziinto yokuhambisa amanzi abantwanaisasazi sokuhambisa amanziinto yokuhambisa amanzi amaninziogalela amanzi Warsawisasazi yokuhambisa amanzi ashushuisitshisi samanziisitshisi samanziI-5l yokuhambisa amanziisitshisi samanzi esingenabhotileisilinda sokuhambisa amanziixabiso lokuhambisa amanziIsipho sokuhambisa amanzi esipho sendalointo yokuhambisa amanzi abantwanaisitshisi samanzi eofisiniisitshisi samanzi sasekhayaixabiso lokuhambisa amanzi ekhayauphononongo lwamanzi okuhambisa amanzi asekhayaisasazi yamanzi kwinkampaniisiselo sokuhambisa amanziisitshisi samanzi edenisitshabalalisi samanzi esitshiweyoIsicoci samanzi esitshixwayo ekhayenieden indawo yokuhambisa amanziisitshabalalisi samanzi ukuba isebenza njaniisimboli sokuhambisa amanzi amamineraliisitshizi samanzi sebhotileisiselo sokuhambisa amanziisitshabalalisi samanzi kwifrijiisitshisi sokuhambisa amanzi kwifriji ukuba isebenza njaniogalela amanzi Warsawindawo yokuqesha amanziixabiso lokuhambisa amanziisiphumo sokuhambisa amanziisaphulelo sokuhambisa amanziisitshisi sokuhambisa amanzi kwifrijiisiselo samanzi abandayoohambisa amanzi kwiinkampani nakwiiofisiohambisa amanziohambisa amanzi kwiinkampaniohambisa amanzi eofisiniamanzi okusasaza amanzi ekhayaabahambisa amanzi edenUkucoca amanzi okuhambisa amanziokusela amanzi okuselaamanzi okuhambisa amanzi entwasahloboohambisa amanziIsitshisi samanzi esinyeamanzi okusela umthomboisixhobo sokuhambisa amanzi kwifrijiIndawo yokujonga amanziamanzi eeofisiamanzi eofisiamanzi kuluhlu lwexabiso leofisiisitshisi samanzi sasekhayaohambisa amanziumsasazi wamanzi amamineraliamanzi kwiindawo zokuhambisa iinkampaniamanzi avela kwi-dispenseramanzi ahambisa kumthengisi iinkampaniamanzi avela kwi-dispenser ukuya ekhayaamanzi avela kuvavanyo lokuhambisaamanzi nge-dispenseramanzi entwasahlobo ngokuhambisa ekhaya